Muuqaalka sheedda bixi
Muuqaalka sheedda bixi sano 3 4 bilood ka hor #355
marka hore aan idhaahdo waxaad bixineysaa adeeg aad u wanaagsan, oo ay kujirto midka "bilaa lacag ah", si aad ujeclaa Flyers sida aniga oo kale! Bogagga shabakaddaada waxaan ka soo degsaday qaar ka mid ah diyaaradaha, laba ka mid ah kuwa aad u horumarsan sida Boeing 777-200ER Ultimate pack, caadi ahaan waxaan ku dhowaad u isticmaalaa diyaaraddaan FSX Daabacaadda dahabka oo leh xirmo xawaareyn.
Waxaan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqay in qaar ka mid ah Muuqaalka sheedda Airport ee ah in aan soo bixi uma shaqeeyo si sax ah, ayaan waxa uu tijaabiyay gaar ahaan laba Maddaarada, aad u fiican loogu talagalay iyadoo jidka ag fadhida: Airport Klagenfurt (Austria) iyo Richmond International (VA) USA , labaduba waxay leeyihiin dhibaatooyin la nidaamka degtey ILS, mid saameyn ugu horeysay ee diyaarad ka soo horjeeda wax cagaha 30 aan la arki karin kor ku dhis 28; mid labaad (Richmond) on ILS 02 dhigi diyaarad cinwaanka dhamaadka ordaana halkii bilowgii runway 02.
In labada kiisaska aan uninstalled kuwa Muuqaalka sheedda cusub iyo labada ILS dhammaataan shaqeeya.
Waxaa laga yaabaa inaad qabto qaar ka mid ah xal loogu talagalay in aan sameeyo ma garanayo.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.394